प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (ओली समूह)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजको दिनमा आफ्नो पार्टी देशकै सबैभन्दा एकताबद्ध पार्टी भएको जिकिर गरेका छन् ।
नेकपा निकट मजदूर संगठन जिफन्टको ओली पक्षीय भेलालाई बिहीवार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी आज देखिएको जस्तो एकता कैयौं वर्षदेखि देख्न नपाएको स्मरण गरे ।
पार्टी विभाजनप्रति चिन्तित कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै ओलीले भने–
'हामीलाई मनमा कस्तो–कस्तो लाग्न सक्छ, पार्टी फुट्यो भनेर ! आज पार्टीमा जस्तो एकता छ, त्यस्तो एकता कति वर्षदेखि थिएन ? आज हाम्रो पार्टी देशमै सबैभन्दा एकताबद्ध पार्टी हो । नेपालमा सबैभन्दा अनुशासित पार्टी नै हाम्रो पार्टी हो ।'
ओलीले विभाजनअघिको नेकपालाई इतिहासकै गएगुज्रेको पार्टीका रूपमा चित्रित गरे ।
'हिजो नेपालका पर्टीहरूमध्ये सबैभन्दा अराजक, अनुशासनहीन, गएगुज्रेको र गैताल पार्टी नै हाम्रो पार्टी बन्यो । पार्टी, पार्टी जस्तो थियो र ? बैठक, बैठक जस्तो थियो र ? यताबाट उठेर एउटा कराउँछ, उताबाट अर्को कराउँछ च्याउँच्याउँ र म्याउँम्याउँ गरेर ..., अहिले पार्टी त्यस्तो छैन । एउटै ध्येय, एउटै धारणा, एउटै लक्ष्य विकास र समृद्धि !' ओलीले भने ।
प्रचण्ड–नेपाल समूह बाहिरिएपछि पार्टीमा उत्साह छाएको ओलीले बताए ।
'आजभोलि शरीर किन टनटन टनटन दुखिरहेको छैन भनेको त्यही पिलो निचोरिएर रहेछ, बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ,' प्रचण्ड–नेपाल समूहतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले भने, 'उहाँहरू जानुभयो, आज पार्टीमा उत्साह छ । पार्टी गतिशील छ ।'